Danjire Berhanu oo kulan balaadhan la yeeshay Qurbajoogta Kusugan Sweden |
Danjire Berhanu oo kulan balaadhan la yeeshay Qurbajoogta Kusugan Sweden
Sweden (NogobNews) 11/12/2011 Danjiraha wadanka itoobiya u fidhiya dalka ingiriiska Mudane Berhanu kebedhe iyo Qunsulka Safaarada itoobiya ee Sweden Marwo Mebret Beyene ayaa waxay kulan aad u xiiso badan la yeesheen Qurbajoogta ee ku nool Wadanka Sweden iyaga oo uga waramay hadafka barnaamijka dib u curashada iyo Himilada isku filaanshaha itoobay higsanayso.
Mudane Berhanu ayaa wuxuu si tafatiran uga waramay ujeedada Biyoxidheenka ABAY iyo Kaalinta looga baahanyahay Qurbajoogta.
Wuxuu ku dhiirigeliyay in qurbajoogtu ay maalgashato dalkooda iyaga oo ka faa,iidaysanaya Fursadaha furan ee Maalgashiga,una faa,iidaynaya Dadkooda iyo dalkoodaba.
Marwo Mebret ayaa dhinaceed si balaadhan u qeexday hadafka dib u curashada iyadoo ballan qaaday in ay soo dhoweynayso cid kasta oo maalgashi ku samaysanaysa Waddankii kana faa,idaysanaysa fursadahaas.
Barnaamijkan ayaa wuxuu u socdaa si xawli ah iyadoo dalalka dareska la ah itoobiya dhammaantood ay ku hawlanyihiin sidii ay fursadahaas uga faa,idaysan lahaayeen.
Safiirka iyo qusnulka ayaa labaduba waxay carabka ku adkeeyeen in ahmiyada qurbajogtu ay tahay mid ay indhah iyo qalbigaba u furtay Dawladda Federaalka iyo Dawald Deegaameedyada ay ka koobantahayba, taas oo ah mid ahmiyada ay leedahay maanta aysan ka dahsoonayn dhammaan waxgaradka iyo masuuliyiinta dalka.